Umfutho wegazi - omunye izinkomba ebaluleke kakhulu isimo umzimba, futhi inani layo kuxhomeke kakhulu empilweni yomuntu. Njengoba sazi, ingcindezi igazi siqukethe amanani amabili ukuthi ibhalwa shot umugqa. ukubaluleka Greater - okubizwa ngokuthi "inhliziyo" noma ingcindezi systolic, kukhombisa amandla ngalo igazi uyakhishwa izitsha nenhliziyo, okungukuthi, wegazi izitsha ngesikhathi ukusikwa inhliziyo, noma systole. Lower, noma "izinso", kuba diastolic, ungakwazi ngempela ukukhuluma mayelana nesimo se-izinso - is wegazi izitsha ngesikhathi diastole, noma isikhawu phakathi Kufinyeta futhi encike ngqo kwi umsebenzi kwezinso. Futhi kangakanani ingcindezi kubhekwa evamile?
Ezivamile amazinga blood pressure - kusukela 100/60 ukuba 140/90, kodwa lena umngcele ezivamile kakhulu. Empeleni, impendulo ngqo embuzweni, onjani ingcindezi kungokwemvelo, akukho futhi ngeke ibe khona: lesi sibalo ngabanye kakhulu futhi kuncike ezintweni eziningi. Khona-ke lokho ingcindezi kungokwemvelo ukuba umuntu oyedwa, lithembela, isibonelo, ubudala - uma usakhula ingcindezi 100/60 usengakwazi kubhekwe kuyinsakavukela, kuyoba ibakhathaze inzima umuntu osekhulile kanye 140/90 - kunalokho, endaweni ethile yobudala yiyona yokusebenza ingcindezi evamile, futhi kuzoxoxwa njengoba okusezingeni eliphezulu ebusheni bakhe. Ngokuvamile, ngeminyaka ingcindezi kwandisa kancane, ngo-emihlanu amaphuzu eminyakeni 10.
Kule ndaba, akukho eside ezifana ingcindezi yokusebenza - kuba inkomba wegazi, lapho umuntu azizwa kahle futhi akwazi ukuqhuba imisebenzi yansuku zonke zingakaze zibe ukuqaleka kancane. Lesi sibalo kungaba eqele ngalé kuyinsakavukela olwamukelwa: ngokwesibonelo, kukhona amacala lapho ingcindezi umuntu lokusebenza 90/60, futhi kwezinye iziguli abanomfutho wegazi ophakeme, lesi silinganiso kungenzeka njengoba low 160/90 noma ngaphezulu, futhi lapho Kunengqondo evamile ngokwamanani isayensi bona bacindezele ukuzizwa ubuthakathaka kanye bekhanda. Ngakho-ke lokho kubhekwa njengento evamile igazi ingcindezi - hhayi kuyinkomba ebaluleke kakhulu, kubalulekile ukuthi umuntu enomuzwa yena kuleli cala.
Futhi, ke akufanele kubhekwe njengento engeyona ngokuphelele kweqiniso blood pressure ukubaluleka etholwe nesilinganiso esikhungweni wezokwelapha - ngokuvamile lesi sibalo siphezulu kunokuvamile. Lokhu kungenxa isimo engavamile kanye neqiniso lokuthi ngiya kudokotela isikhungo sokwelapha kwabaningi namanje esimweni esicindezelayo. Ngokuvamile, isimo esingokomzwelo isemqoka kakhulu umfutho wegazi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubantu abanemizimba yokucindezeleka okwandayo - noma yiziphi izinguquko isimo kungaba avuse izithelo zawo, kungakhathaliseki imizwa emihle noma emibi. Abantu ne umfutho ophansi wegazi mancane singangena iyehla iyenyuka yayo ngenxa kwemizwa, kodwa ushintsho sezulu kuyabathinta kakhulu. Isimo sezulu ikakhulukazi umfutho womoya kuyinto nomphumela evelele kakhulu abantu othambekele kokubili ongaphakeme futhi umfutho ophakeme, ikakhulukazi kuzuba lwayo olucijile.
Iqiniso kangakanani ingcindezi kubhekwa ejwayelekile kumuntu incike isisindo sakhe. Nge ukwanda isisindo emzimbeni ngenxa ekuqongeleleni fat ingcindezi ikhula ngo-5 amaphuzu yonke extra 10 amakhilogramu kanye kwesisindo, ngokuphambene, ngokuvamile encishisiwe, ngakho nokuvimbela nomfutho wegazi ophezulu kubaluleke kakhulu ukuze ubuke isisindo sakho. Ngaphezu-high blood pressure, ukhuluphele kuletha izinkinga eziningi zempilo, ingasaphathwa nakho ngokomzwelo, nakho nomthelela ingcindezi akuyona indlela engcono kakhulu.
Ngakho, impendulo yombuzo othi kangakanani ingcindezi kubhekwa evamile simiswe ngalendlela lelandzelako: ukuthi lapho umuntu uzizwa okuhle. Noma kunjalo, kubalulekile ukuba senze wonke umzamo ukuze kube njengoba cimeza njengoba enzeka ezivamile - kwesisindo, ukulungiswa lokudla ukudla okufanele nokuvivinya baphuza uketshezi kanye nokuvivinya umzimba ngendlela elinganiselayo ukuze uqinise esimiso senhliziyo nemithambo yegazi ukusiza ngendlela engcono kakhulu.
Protrusion ka lumbar nomgogodla. Ukwelashwa nokuvikelwa protrusion we lumbar
Ukubhodla: uphawu, izimbangela kanye nezindlela kulahlwa
Chondromalacia ka kwedolo: izimbangela, izimpawu, uphethwe futhi ukwelashwa
Katun River. Rafting eMfuleni Katun. Intaba Altai - Katun
Indlela yokwenza amaphuzu e-crossword eZwini: indlela elula kanye nemfundo
Kuyini unhlangothi nasemiphumeleni yaso
Kuyini speshl: izinguqulo nenkulumo kunazo owaziwa ngegama elithi
Ungaqali Chainsaw? Ukulungisa izandla zakho atholakale wonke umuntu!
Physocarpus kalinolistny Diablo - umbukwane engadini umhlobiso